Ọnọdụ ikuku ụwa | Network Meteorology
El Ọnọdụ ikuku ụwa Ọ bụ ụdị ihu igwe nke okpomoku nke enwere ike inwe ọnọdụ okpomọkụ kwa afọ nke ọtụtụ n'ime anyị na-atụ anya ya: karịa 23ºC. Mmiri ozuzo bara ụba nke ukwuu, ma karịa ihe niile, oge niile, yabụ na mpaghara ndabara ebe ha nwere ihu igwe a, ha nwere ike ịnụ ụtọ oke ọhịa na oke ọhịa, ụdị nke ị ga-ebugharị epupụta nke nkwụ na fern.ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ike ịga ije.
Ọ bụ, mgbe ahụ, otu n'ime ihu igwe kachasị amasị, mana ọ dị na obere obere mpaghara ma ọ bụ mpaghara. Ka anyị matakwuo banyere ihu igwe a na-atọ ụtọ ma na-achọ ịmata ihe.
1 Kedu ebe na ebee ka ikuku ikuku dị?
1.1 Ihe nkiri
2 Ndụ na ikuku ikuku
2.3 Ndị mmadụ
Kedu ebe na ebee ka ikuku ikuku dị?
Ejiri ihu igwe a nwere ezigbo mmiri ozuzo, karịa 1500-2000mm kwa afọ, na-enwe kwa afọ kwes njupụta ala karịa 3ºC. Enweghị oge ọ bụla, mana ọ na-echekwa otu ma ọ bụ obere otu okpomọkụ ahụ na ọtụtụ ma ọ bụ obere otu lita mmiri na-ada kwa ọnwa. Ọ dị n'etiti 5ºN na 5ºS, na mpaghara ndị dị n'akụkụ ụwa, na obere ala latitude, ebe ifufe na-agbasi ike bụ ifufe azụmaahịa. N'ihi mmiri ozuzo na-adịgide adịgide, ọ bụghị naanị na mbara ala na-adị mgbe niile, kamakwa osimiri abụọ kachasị ike na, ya mere, nke kachasị mkpa n'ụwa: Amazon na South America na Congo na Africa.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ụfọdụ ebe, ị pụrụ ịnụ ụtọ a idụhe ma ọ bụrụ na ị na-aga efere amazon na South America, ndị Congo na ala mmiri onye Guinea n'Africa, Agwaetiti Indonesian na n'ebe ndịda Malay Peninsula na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Osimiri ndị dị na mpaghara ndị a buru ibu buru ibu, ọkachasị n'ihi oke mmiri ozuzo. Ma na mgbakwunye, evaporation ahụ siri ike nke na ozugbo okpomọkụ na-ada ntakịrị, oké mmiri ozuzo na-ezo nke na-ebute ụwa n'osimiri.
Climograph nke Nueva Guinea
Iji nye gị echiche nke ụdị ihu igwe ị bi na mpaghara ndị dị nso na mpaghara ikuku ụwa, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịkpọtụrụ eserese ihu igwe. Ihe osise dị n’elu kwekọrọ na nke New Guinea, n’Africa ma, dịka ị pụrụ ịhụ, mmiri ozuzo na-aba ụba na julaị, ma ọ dị obere na Machị. Otú ọ dị, okpomọkụ na-edebe mgbe niile 24ºC.
Ndụ na ikuku ikuku
Typedị ihu igwe a bụ ebe kachasị iche iche n'ụwa dị iche iche. Ma osisi na anụmanụ dị iche iche, mana anyị ga-ahụ ya iche:
Dịka anyị siri kwuo, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị ike ịbanye oke ọhịa na oke ọhịa. E nwere ụdị abụọ: the ombrophilous ọhịa, nke e ji enwe mmiri na-aga n'ihu, na semiombophilic, ya bụ, na nke ha gabigara oge “nkụ”. Na nke ikpeazụ ọ bụghị na e nwere oge, kama ọ bụ na e nwere osisi ndị na-agaghị enwe ike iguzogide mbelata a na mmiri na, ya mere, ga-atụda akwụkwọ ha ruo mgbe ọnọdụ hydric ga-aka mma.
N'agbanyeghị nke ahụ, n'ime ha abụọ ọ ga-esi ezigbo ike ịchọta otu ụdị kachasịEbe ọ bụ na ha niile, site na mgbe ha toro eto, mee ihe niile enwere ike iji nweta ìhè anyanwụ dịka ha chọrọ. Na ihe na-atọ ọchị bụ na na niile »ala» na e nwere osisi, na niile, ọbụna na alaka nke osisi ebe anyanwụ na ụzarị ike o siri ike iru.
N'etiti osisi na-anọchi anya anyị na-ahụ orchid, las Ugboro abụọ, ọtụtụ n'ọbụ aka (Cocos nucifera, Astrocaryum chambira, Oenocarpus mapora, n'etiti ndị ọzọ), eucalyptus (dị ka egwurugwu eucalyptus ma ọ bụ Eucalyptus deglupta), hea, bamboo, ferns, wdg. N'ezie, ọ fọrọ nke nta ka enweghị ahịhịa ọhịa, ebe ọ bụ na asọmpi a siri ike nke na osisi, ahịhịa, nkwụ na osisi vaịn na-eweghara ohere iji too.
Anụmanụ bi ebe a na-adịkarị obere karịa, ebe ha nwere ike iji nwayọ na-agagharị ma ghara ịhụ ya, dịka azu y awọ dị mma dị ka nke nwere anya uhie, mana enwekwara ndị ka ibu: enwe, feline (jaguar, puma), dolphins (dị ka pink), nduru, agu iyi, agụ iyi, ndị toucans, macaws...
N'ezie, ụmụ mmadụ bikwa ebe a. Mụ amaala bi na nkwekọrịta zuru oke na okike, ịchịkọta mkpụrụ osisi, na ịchụ nta ụmụ anụmanụ ịlanarị. Ka ọ dị ugbu a, mmadụ ole na ole na-ebi n'oké ọhịa, nke mere ka ha nwee ike ịga n'ihu na ọdịnala na omenala ha na-enweghị oke nsogbu.
Agbanyeghị, mmadụ nke oge a na-achọwanye ohere maka ya na ezinụlọ ya, ọtụtụ ala ubi, ọtụtụ ebe ịzụ ahịa, karịa ... nke ihe niile, ọ bụ ya mere o ji eyi ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ole na ole fọdụrụnụ egwu na ụwa na, ha ụmụ amaala. N'ezie, na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ọhịa ndị ahụ na-alaghachi n'ihi ịkụ osikapa, tii, shuga na hevea.
Ugbu a ị matara ihe banyere ikuku ikuku, gịnị ka ị chere? 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ọnọdụ ikuku ụwa
M hụrụ ya n'anya karịa ngwụcha akụkụ I nwere ihe niile mere
Ọ B B ULLBULLLULL